पत्रकार महिलाका लागि दुई दिने स्थलगत फोटो पत्रकारिता तालिम. – Sabaikoaawaj.com
पत्रकार महिलाका लागि दुई दिने स्थलगत फोटो पत्रकारिता तालिम.
शनिबार, असार १०, २०७४ 9:07:56 PM	मा प्रकाशित
पोखरा, १० असार /पोखराका क्रियाशिल पत्रकार महिलाहरुका लागि दुई दिने स्थलगत फोटो पत्रकारिता तालिम शनिवारदेखि शुरु भएको छ । सञ्चारिका समूह पश्चिमाञ्चलको आयोजना तथा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको सहयोगमा कास्कीको पर्यटकिय स्थल धम्पुसमा तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रिय सदस्य दुर्गा भण्डारी, खोज पत्रकारिता केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य मिना शर्मा लगायतले बोलेका थिए । सञ्चारिका समूह पश्चिमाञ्चलका अध्यक्ष जमुना शर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव कविता श्रेष्ठले गरेकी थिईन् ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, असार १०, २०७४ 9:07:56 PM